အရည်အသွေးပြည့်ဝသောဖုန်စုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၏အစိတ်အပိုင်းများ - တရုတ်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဖုန်စုပ်စက် - Minghe Casting
Vacuum Casting ဆိုတာဘာလဲ
ဖုန်စုပ်ခြင်း သတ္တုများကိုလေဟာနယ်ထဲ၌အရည်ပျော်၊ သွန်းလောင်းခြင်းနှင့်ပုံသွင်းခြင်းတို့တွင်ပြုလုပ်သောသတ္တုများထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ လေဟာနယ်ဖြင့်သွန်းလောင်းခြင်းသည်သတ္တုထဲတွင်ဓာတ်ငွေ့ပါဝင်မှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေပြီး၊ ဤနည်းသည်အထူးတောင်းဆိုသောအထူးသံမဏိသတ္တုများနှင့်အလွန်လွယ်ကူစွာဓာတ်တိုးနိုင်သည့်တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ Vacuum casting သည်စျေးကြီးပြီးအများအားဖြင့်သတ္တုစပ်များနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောသတ္တုစပ်များကိုအရည်ပျော်စေသောအငွေ့အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါမှိုမတည်ငြိမ်သောဆံ့မသငျ့သညျ။
Vacuum casting ကိုယေဘုယျအားဖြင့်ပုံစံနှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။
လေဟာနယ်သွန်းခြင်း၏နိယာမမှာသဲသေတ္တာကိုတံဆိပ်ခတ်ရန်ပလတ်စတစ်အိတ်ကိုသုံးခြင်းနှင့်မှိုအတွင်းရှိလေကိုထုတ်ယူရန်ဖုန်စုပ်စက်ကိုသုံးခြင်းဖြင့်မှို၏အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပအကြားဖိအားကွာခြားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ လိုအပ်သောလိုင်ဖွဲ့စည်းရန်။ ရိုးရာသဲပုံသွန်းခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော V နည်းလမ်းသွန်းခြင်း၏အကြီးမားဆုံးအားသာချက်မှာကော်များကိုမသုံးခြင်း၊ သဲလုပ်ငန်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်စေးကပ်သဲသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းနှင့်မော်ဒယ်လုပ်ခြင်းနှင့်သဲသောင်ပြင်သန့်ရှင်းခြင်းကိုလုပ်သားပမာဏများစွာလျော့နည်းစေပြီး သဲဟောင်း 95% ကျော်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
လေဟာနယ်ပုံသွန်းခြင်းဖြစ်စဉ်မှထုတ်လုပ်သော Cast များသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးမျက်နှာပြင်ချောချောမွေ့မွေ့၊ ရှင်းလင်းသောအကြမ်းဖျင်း၊ တိကျသောအရွယ်အစား၊
အကယ်၍ သင်၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးမြန်ဆန်သောလေဟာနယ်ပုံသွန်းလောင်းနည်းကိုရှာဖွေချင်လျှင် Minghe သည်သင်အတွက်ရွေးချယ်စရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ကျယ်ပြန့်သောအတွေ့အကြုံများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏လေဟာနယ်ပုံသွန်းလောင်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့်အသံနိမ့်မှမြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုပြေးလမ်းနှစ်ခုလုံးအတွက်ရရှိနိုင်သည်။ Minghe နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ယန္တရားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်မားစွာထိန်းသိမ်းထားခြင်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်လေဟာနယ်သွန်းပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ထုတ်ကုန်များကိုအဆင့်မြင့်အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်သိသိသာသာငွေနှင့်အချိန်ကိုသက်သာစေသည်။ ကျယ်ပြန့်သောပစ္စည်းများနှင့်မျက်နှာပြင်အချောသတ်များကသင့်စီမံကိန်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သံမဏိ၊ အလူမီနီယမ်၊ ကြေးဝါ၊ ကြေးနီ၊ သံမဏိ၊ ပလပ်စတစ်စသည်တို့အပါအ ၀ င်ကုန်ကြမ်းများကိုသုတ်ခြင်း၊ ဆေးသုတ်ခြင်း၊ သုတ်ခြင်း၊ အနိမ့်အမြင့်၊ အမှုန့်နှင့်အခြားပြီးပြည့်စုံသော ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင်၏အစိတ်အပိုင်းများအတွက်မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးပိုကောင်းစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုံးစံအားဖြင့်လေဟာနယ်ပုံသွန်းလောင်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်ကား၊ ဆေး၊ လေ၊ အာကာသ၊ အီလက်ထရွန်နစ်၊ အစားအစာ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ လုံခြုံရေး၊ အချိန်တိုအတွင်းမှာအခမဲ့ကိုးကားရန်သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပို့ရန်သို့မဟုတ်သင်၏ပုံဆွဲတင်ရန်အစာရှောင်ခြင်း။
Vacuum Casting ၏လုပ်ငန်းစဉ်
- ပုံစံ - ပုံစံကိုအချည်းနှီးသောမှိုပြားပေါ်တွင်တင်ပါ။ ပုံစံပေါ်တွင်ပိတ်ဆို့ပေါက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ လေဟာနယ်ကိုအသုံးချသည့်အခါဤအပေါက်များကပလပ်စတစ်ဖလင်ကိုပုံစံနှင့်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထားရန်ကူညီသည်။
- ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်း။ မြင့်မားသောနှုန်းနှင့်မြင့်မားသောပလပ်စတစ်ပုံသဏ္deာန်ရှိသောပလပ်စတစ်ဖလင်သည်အပူပေးစက်မှအပူနှင့်ပျော့ပျောင်းစေသည်။ အပူချိန် ၈၀ နှင့် ၁၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြားတွင်ရှိသည်။
- ဖလင်ဖွဲ့စည်းခြင်း - နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောရုပ်ရှင်ကိုမော်ဒယ်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်လေအပေါက်မှတဆင့် 200 ~ 400mmHg ၏လေဟာနယ်စုပ်ယူမှုအောက်ရှိရုပ်ရှင်ကိုမော်ဒယ်၏မျက်နှာပြင်နှင့်ကပ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
- သဲသေတ္တာကိုထည့်ပါ။ ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့ခြင်း (လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ရန်မလိုအပ်) ပြီးနောက်သဲသေတ္တာကိုရုပ်ရှင်နှင့်ဖုံးအုပ်ထားသောပုံစံပေါ်တွင်တင်ပါ။
- သုတ်ခြင်းနှင့်နှိပ်ခြင်း။ သဲသေတ္တာထဲ၌ကောင်းသောအဆာနှင့်အမှုန်အရွယ်အစား ၁၀၀ မှ ၂၀၀ ထိရှိသောသွေ့ခြောက်သောသဲများကိုထည့်ပြီးနောက်ပိုမိုမြင့်မားသောသိပ်သည်းမှုနှင့်သဲများကိုကျစ်လစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
- အဖုံးမှို - သလိပ်ခွက်ကိုဖွင့်ပြီးသဲအလွှာ၏မျက်နှာပြင်ကိုချောမွေ့စေပြီးသဲသေတ္တာကိုပိတ်ရန်ပလတ်စတစ်အဖုံးဖြင့်ဖုံးအုပ်ပါ။
- မှိုထုတ်လွှတ်ခြင်း - ဘူးကိုမျက်နှာပြင်ဖုံးအုပ်ထားသည့်ရုပ်ရှင်၏အကူအညီဖြင့်လေထုဖိအား၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင်ဘူးကိုဖယ်ရှားပြီးမှိုကိုမာစေသည်။ မှိုထုတ်လိုက်သောအခါအနုတ်လက္ခဏာဖိအားသေတ္တာ၏လေဟာနယ်သည်တင်းပလိတ်၏စုပ်ယူနိုင်စွမ်းအားလွှတ်ပေးရန်ရုပ်ရှင်သို့လွှတ်ပေးလိုက်သည်၊ ထို့နောက်ထိပ် box ကိုမှိုဖြည့်ရန်ထုတ်ပစ်သည်။
- ပိတ်ထားသောသေတ္တာသွန်းလောင်းခြင်း - အကွက်ကိုမပိတ်ခင်၊ သံနှင့်အအေးသံကိုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီလျှော့ချနိုင်ပြီး၊ အောက်နှင့်အောက်အိတ်များကိုပေါင်းစပ်။ သွန်းလောင်းသောသံမဏိနှင့်သွန်းလောင်းသောသံမဏိဖြင့်သွန်းလောင်းနိုင်သည်။ တစ် ဦး လေဟာနယ်ပြည်နယ်။
- သေတ္တာထဲမှထွက်လာသောသဲများ - သင့်တော်သောအအေးခံပြီးနောက်လေဟာနယ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးပုံမှန်ဖိအားကိုပြန်လည်ပေးသည်။ သို့မှသာစီးဆင်းနေသောသဲများထွက်လာပြီးသဲလုံးများနှင့်စက်မှုသဲမပါဘဲသန့်ရှင်းသောသွန်းခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သဲကိုအအေးခံပြီးနောက်နောက်တဖန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများကို Vacuum Casting ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ
2. ရုပ်ရှင် - အပူ ▶
3.Film ဖွဲ့စည်းခြင်း ▶
သဲ Box ကိုတင်ပါ▶
6. Box ကိုပိတ်▶
9.Intelligent စဉ်ဆက်မပြတ် Cast▶
ဖုန်မှုန့် Casting ၏ Minghe ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာရေး
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုံးစံအားဖြင့်လေဟာနယ်ပုံသွန်းလောင်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်သင်၏မော်တော်ကား၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ လေကြောင်း၊ အီလက်ထရွန်နစ်၊ အစားအစာ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ လုံခြုံရေး၊ အချိန်တိုအတွင်းမှာအခမဲ့ကိုးကားရန်သင်၏မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်သို့မဟုတ်သင်၏ပုံဆွဲခြင်းကိုမြန်မြန်ပို့ပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရန် sales@hmminghe.com ကျွန်ုပ်တို့၏လူအများ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကိရိယာများသည်သင်၏လေဟာနယ်သွန်းခြင်းစီမံကိန်းအတွက်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုမည်သို့ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်ကိုကြည့်ရန်။